Ny tsimok'aretina corona sy fanombohan'ny krizy lalina ary arahan'ny fanararaotana Tiorka an'i Eropa
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 28 Febroary 2020	• 9 Comments
Lohahevitra roa samy hafa izy ireo saingy mbola mieritreritra aho fa misy ifandraisany betsaka: virus virus sy Turkey. Amin'izay fotoana izay hisehoan'ny tsimokaretina corona, hitantsika fa manenjana ny antsy any Syria i Turkey. I Torkia dia manery ny Syria, Iran ary Rosia; ireo firenena roa izay azon'ny Syriana […]
Inona no ao anatin'ny fitsapana 22 herinandro ary azo atao ve ny manova ny fitovian'ny lahy sy ny vavy?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 27 Febroary 2020	• 6 Comments
Taorian'ny lahatsoratra teo aloha momba ny fitsapana momba ny 22 herinandro, dia nety ny nahazo fanehoan-kevitra mitsikera. Tsy vaksinin'ny otrikaretina akory izy io, fa bakteria bakteria, ka tsy hisy fiantraikany amin'ny firaisana amin'ny foetus ao an-kibo. Andao hojerentsika izany eo ambany mikroskopia. Voalohany indrindra, […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 24 Febroary 2020	• 10 Comments
Nianjera ny Dow Jones androany, 24 febroary, ary nahazo isa mihoatra ny 1000 noho ny tsy fahatokisana an'izao tontolo izao momba ny virus corona. Any amin'ireo tanàna italiana izay hita ny tsimokaretina dia nanomboka ny fihazakazahana teny amin'ny toeram-pivarotana ary misy ny tahotra. Ilay mpikirakira tsikombakomba diso an'i Martin Vrijland no nanambara mialoha izany, fa ny tafika an-tserasera an-tserasera dia mbola vonona hatrany […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 24 Febroary 2020	• 13 Comments
Misy fanamarihana mitombina fa ny governemanta dia nanao hermaphrodite ny mponina nandritra ny taona maro tamin'ny alàlan'ny IVF sy ny vaksiny, ary ny vahoaka dia miandalana ary manelingelina ny sosona iray manontolo. Ity no toetrantsika. Novakiantsika ny momba izany ary ampidiro ny sorokarohantsika momba ny 'teti-piraisana tsikombakomba indray'. Na dia afaka manatsoaka hevitra isika fa ny marika rehetra dia manondro izany […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 21 Febroary 2020	• 9 Comments
"Mahasosotra" dia ny hoe miresaka amin'ny zazalahy na zazavavy ianao, fa ilay olona kosa manondro ny tenany ho zavatra hafa. Tsy mahagaga raha toa ka tsy nisy nanjo ireo olona am-polony taona io foto-kevitra io, satria taloha dia zazalahy na zazavavy na lahy na vavy ny olon-drehetra. Mety efa nanao firaisana ianao, lesbians […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 19 Febroary 2020	• 3 Comments
Ny fifandraisan'i André Hazes Jr. ary Bridget Maasland dia feno ny fampahalalam-baovao isan'andro ary mbola nahaliana azy ny maro. Azo inoana fa hiteraka fisondrotana be ao amin'ny Telegraaf sy ny gazetiboky Privé no hamidy toy ny mofomamy mafana. Ny fifandraisan'i Marco […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 19 Febroary 2020	• 7 Comments
Ireo baomba an-tserasera Rosiana dia voalaza fa namotika ny fitaovana ara-miaramila ilaina avy any Tiorkia tamin'ny 17 Febroary. Notaterina fa fiara mifono 23 no very tany Syria (anisan'izany ny fiara Leopera 4 - eo ho eo. Matetika […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 18 Febroary 2020	• 6 Comments
Mety efa nahita ireo hafatra tonga ianao, fa ny fiantraikany fanampiny amin'ny fihanaky ny tsimokaretina corona any Chine dia ny fisintahan'ny governemanta shinoa ny vola amin'ny mivezivezy mba hamongorana azy. "Na dia mitohy aza ny fivoahan'ny Coronavirus China vaovao, dia nanatanteraka paikady vaovao ny banky foibe ao amin'ny […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 14 Febroary 2020	• 11 Comments
Ny lohatenin'ity lahatsoratra ity dia mety tsy nahasarika an'ilay mpamaky vaovao, fa ity lahatsoratra ity dia tsy natao ho an'ny olona izay manaiky fa tsy mahay izy ireo. Eny, betsaka ny olona manodidina anao izay mahita ny foto-kevitry ny "fanahy" na "fanahy" zavatra tsy mampino. Ireo dia olona izay mieritreritra ny zavatra ara-nofo fotsiny ary […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 12 Febroary 2020	• 6 Comments
Raha hitantsika ny fiara fitaterana lehibe sy ny fitaovana hafa mankany amin'ny faritanin'i Idlib any Syria, dia toa mikasa ady tanteraka hanohitra an'i Syria i Tiorkia. Ity horonantsary eto ambany ity dia nanomboka omaly, 11 febroary ary mampiseho fisintahana lehibe be. Nandritra izany fotoana izany, nitifitra helikoptera mpiady Syriana ihany koa i Turkey. Erdogan […]
Total visits: 357.409
ZalmInBlik op Ny tsimok'aretina corona sy fanombohan'ny krizy lalina ary arahan'ny fanararaotana Tiorka an'i Eropa
Dick Klein Oonk op Ny tsimok'aretina corona sy fanombohan'ny krizy lalina ary arahan'ny fanararaotana Tiorka an'i Eropa
Riffian op Ny tsimok'aretina corona sy fanombohan'ny krizy lalina ary arahan'ny fanararaotana Tiorka an'i Eropa
Zandi Eyes op Ny tsimok'aretina corona sy fanombohan'ny krizy lalina ary arahan'ny fanararaotana Tiorka an'i Eropa